मौसम बिहीबारदेखि शनिबारसम्म थप ड’रलाग्दो बन्ने भन्दै महाशाखाले जारी गर्यो यस्तो चे’तावनी ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/मौसम बिहीबारदेखि शनिबारसम्म थप ड’रलाग्दो बन्ने भन्दै महाशाखाले जारी गर्यो यस्तो चे’तावनी !
काठमाडौं । आगामी बिहीबारदेखि शनिबारसम्म बाढीपहिराको जो’खिम बढ्ने भएको छ ।
मनसुन न्यूनचापीय रेखा नेपालको तराई भूभाग नजीक रहने भएकाले बिहीबार रातिदेखि नेपालमा मनसुन थप सक्रिय भई बाढीपहिराको जो’खिम बढ्ने सम्भावना रहेको वरिष्ठ मौसमविद् मीनकुमार अर्यालले बताउनुभयो । मनसुन सक्रिय भएसँगै नेपालका धेरैजसो स्थानमा लगातार वर्षाका साथै तराई र पहाडका केही भूभागमा भारी वर्षासमेत हुने बताइएको छ ।